को sinuses को सुनिंनु, वा sinusitis के हो
Sinuses - यो के हो?
"साइनस" बाट लिइएको हो - हामी शब्द "sinusitis" भनेर मान्छु पर्छ। तसर्थ, के sinusitis प्रकट अघि, गरेको पनि sinuses आफूलाई के पत्ता गरौं। हाम्रो नाक वरिपरि खोपडी हड्डी भित्र paranasal sinuses छन् - यो sinuses (खाली ठाउँ) छ। तिनीहरूलाई धन्यवाद, हाम्रो आवाज inimitable Timbre र धेरै मानिसहरू एकदम सुन्दर ध्वनि छ। साथै, खोक्रो sinuses को माध्यम द्वारा मानव खप्पर वजन मा हल्का हुन्छ।
sinusitis के हो
को sinuses inflamed हो भने, हाम्रो आवाज हामी, त्यसैले बोल्न भने "नाक" भन्न सुनिन्छ। Sinuses भन्दा साधारण चिसो पछि inflamed हुन्छन्। मानिस paranasal sinuses (प्वाल) को चार जोडी छ। तिनीहरूले साना खुलने द्वारा नाक गुहा जडान भएका छन्। तिनीहरूलाई खोल छ भित्र, यसको संरचना मा पानी जस्तो तरल पदार्थ एक प्रकारको secretes। त्यो, बारी मा बाहिर सुखाने देखि sinuses र नाक गुहा रोक्छ। को paranasal sinuses प्रत्येक मा जान्छ , को नाक गुहा हावा र खकार खुलेर पारित गर्न सक्छ अनुमति, त्यसैले यसलाई मा हुन्छ कि कुनै पनि संक्रमण, लो र sinuses सुनिश्चित। एक banal rhinitis समयमा खराब जीवाणु यी ठाउँहरू प्राप्त भने, sinuses inflamed खोल सुरु हुन्छन्। यो एक पानी जस्तो purulent तरल पदार्थ मा खोल्दै देखि, को प्वाल सबै खाली ठाउँ भर्न सक्ने पानी जस्तो तरल गर्न विनियोजन रकम बढ्छ! एकै समयमा निम्न प्रदर्शन : sinusitis को लक्षण यो एक टाउको दुखाइ प्राप्त गर्न सुरु, एक व्यक्ति एकदम बढ्ने शरीर तापमान। Sinusitis वा sinusitis?
के तपाईं मा eyebrows माथिको क्षेत्रमा निधारमा दबाव संग गर्न सक्छन् निर्धारण। एक मानिस दुखाइ को निधारमा छ महसुस भने, frontal sinuses जो तपाईं sinusitis छ भन्ने हो, inflamed छन्। अचानक आँखा अन्तर्गत हड्डी मा दबाव समयमा दुखाइ महसुस भने, सुनिंनु तथाकथित मा पारित गरेको छ को maxillary साइनस। यस मामला मा, तपाईं अंदाजा हुन सक्छ रूपमा, त्यहाँ sinusitis भनिन्छ सर्त छ। Sinusitis किनभने धेरै बारम्बार र लामो sinusitis एक व्यक्ति दृष्टि ग्रस्त हुन सक्छ मा, एक कम खतरनाक छ! मानिसहरूलाई मा maxillary sinuses को सुनिंनु मा आम प्रभावित प्वाल मा तनाव र पीडा छ, नाक श्वसन, हिचकते गन्ध विचलित, आँसु प्रवाह गर्न थाल्छन्। रोग रोकथाम
को sinuses (paranasal sinuses) को सुनिंनु जोगिन, कुनै पनि देखा पर्छ गम्भीर विचार दिन प्रयास र तपाईं एक रूघाँ छ। र यो आफ्नै हुनेछ भनेर आशा छैन। प्रतीकात्मक बोल, ढिलाइ मृत्यु जस्तै छ। निस्सन्देह, सामान्य लक्षण यो जोखिम लिन बुद्धिमानी हो किनभने कुराहरू गर्न सक्छन् र के, तर बुझ्न के, sinusitis या sinusitis छ व्याख्या छैन! यसलाई न्यानो भन्दा नाक मा थोपा साथ "मित्र बनाउन" सारा हप्ताको लागि राम्रो हुन, र आफ्नो नाक आफ्नो जीवन को सबै बाँकी मुर्दा गाड्नु थियो! एकदम गाह्रो र लामो व्यवहार paranasal sinuses को कि सुनिंनु सम्झना!
त्यसैले, माथि माथि योग। sinusitis के हो? यो एक विशेष sinuses मा उत्पन्न बनाउन संक्रामक र भडकाऊ प्रक्रिया हो sinusitis, तीव्र नाक को या पुरानो सुनिंनु। sinusitis - - यो रोग एक विभिन्नता देखिन्छ जब maxillary साइनस को inflamed mucosa।
बच्चा के रोक्छ र? गुदा मा खुजली किन?
Rheumatoid गठिया: क्रममा कसरी नेतृत्व जोइन्टहरूमा
Ting Hiafen - संसारमा सबै भन्दा ठूलो प्राकृतिक स्तन को मालिक
छाला रोग। Erythema multiforme Exudative
तपाईं पछि खान छैन भने तपाईंको आंकडा बारेमा6समीक्षा उत्साहित हुनेछ!
राम्रो प्रबलित: आकार, GOST। ठोस उत्पादनहरु
को Goths (जनजाति) र मान्छे कस्तो हो?
को गर्भाशय को सफाई वैक्यूम: प्रक्रिया, परिणाम समीक्षा
स्पेन मा प्रसिद्ध स्की रिसोर्ट्स
शिशुहरू मा Staphylococcus Aureus को लक्षण के के हुन्?
छोराछोरीको होटल चयन गर्न कसरी।
उपयोगी जानकारी: सुन्निएको गर्दा खुट्टा के
मानिसहरूले पानीको गुण कसरी प्रयोग गर्छन्? पानीको गुण र सर्तहरू